न्यायालयमा भूइचालो- राजनितिक दल तैं चुप, मैं चुप
रूपा खड्का बिहीबार, कात्तिक ११ २०७८
उता जबराको यस्तो घोषणा हुँदासमेत राजनितिक दलहरू केही बोलेको छैन । नत सरकार गठबन्धनले चुइक्क गरेको छ न विपक्षीले आवाज उठाएको छ ।
काठमाडौं । अहिले चरम विवादमा रहेका न्यायापालिका प्रमुख अर्थात प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले बैधानिक बाटो बाट हटाउन चुनौती दिएका छन् । सम्पूर्ण न्यायाधीश तथा पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुसम्मले राजिनामा मारिरहँदा चोलेन्द्र भने आफू बैधानिक बाटोबाट आएको भन्दै सोही प्रक्रियाबाट बाहिरिने तर सडकबाट कसैले माग्दैमा राजिनामा नदिने बताइसकेको छन् ।
उता जबराको यस्तो घोषणा हुँदासमेत राजनितिक दलहरू केही बोलेको छैन । नत सरकार गठबन्धनले चुइक्क गरेको छ न विपक्षीले आवाज उठाएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालयको दाउपेचमा आफूू नफस्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तो अर्थपूर्ण मौनताले जबरालाई राजिनामा नदिन उक्साइरहेको छ । उनले आफू राजिनामा नदिने र महाअभियोग लगाउने तयारी पनि नभएको बेला अझैै न्यायालयको नेतृत्व गर्न पाउनेमा आशाबादी छन् तर ढुक्क भने हुन सकेको छैन ।
यस्तोमा न्यायालयले निकास पाउन सकेको छैन । बन्दी प्रत्याक्षीकरणको रिट समेत नहेरि इजलास बहिस्कार गरेर जबराको राजिनामा माग्दै हिँडेकोमा न्यायाधीशहरु अब लुरुक्क परेर सर्वोच्च फर्कने स्थिति छैन । उनीहरुले कि वार कि पार लगाउने तर यसै अदालत नर्फकने बताइसकेको छन् ।
मंगलबार बसेको न्यायाधीशहरुको बैठकले पनि जबराको राजिनामा नै मागेका छन् । यो काण्डले निकास नपाउँदै उनै चोलेन्द्रले तोकेको इजलास बहिस्कार गरेका न्यायाधीशहरुलाई फेरि इजलासमा बस्न नैतिकताले पनि अप्ठयारो परेको छ । यस्तो सर्वोच्चबाट कुनै काम हुने अवस्था छैन भने महत्वपूर्ण मुद्धाले सुनुवाई नपाउँदा निकै देशमा न्यायिक विचलनको स्थिति देखा पर्ने निश्चित छ ।
सुरुदेखि नै विवादास्पद छवि बनाएका जबराको अहिले विवाद उत्कर्षमा पुग्नुको मुख्य कारण भने मन्त्रीपरिषद्मा भाग खोजेको तथ्य बाहिर आउनु र भाग जसरी नै उनकै जेठानलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बनाउनु रहेको छ । परमादेशबाट देउवालाई सरकारमा जाने बाटो खुलाएका जबरालाई मन्त्रीपरिषद्मा भाग दिएर खुसी बनाउन खोजिएपनि वातावरण सोचेजस्तो नहुँदा अहिलेको स्थिति आएको हो । मिडियाले सबै छाताछुल्ल पार्दा पनि देउवाले गजेन्द्र हमाललाई उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएरै छाडे र अन्तमा हमाल आफैले दुई दिनपछि राजिनामा दिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस र सरकारले प्रधानन्यायाधीश प्रकरण र अदालतको बारेमा केही नबोल्ने बताएका छन् । विवाद निस्केको लामो समयपछि उनले आफ्नो पार्टी र सरकारको धारणा सार्वजानिक गरेका हुन् । तर उनले हमाल आफ्नो पार्टीका नेता भएका दाबी गरेका छन् । हमाल मन्त्री नियुक्ति पछि पनि केही नबोलेका उनले राजिनामा दिएको लामो समयपछि हमाल आफ्नै पार्टीको नेता भएको स्पष्टिकरण दिएका हुन् । हुन त हमाल नेपाली कांग्रेसबाटै राजनितिमा लागेका हुन् ।
यसअघि सोमबार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू न्यायालयको दाउपेच र गुटमा नफस्ने घोषणा गरिसकेको छन् । प्रधानमन्त्री हुँदा जबरा निकट रहेको ओली आफ्नो दुइ दुई पटकसम्मको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई उल्टाएर उल्टै परमादेशबाट देउवा सरकार बनाएपछि चिढिएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीशको राजिनामाको विषयमा बोल्दै परमादेश दिने पाँचै जना न्यायाधीशले नैतिकतामा राजिनामा दिन पर्ने बताएका छन् ।
उता नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो धारणा राखेको छैन । माओवादीकै नेताहरुको मुद्धा अदालतमा विचाराधीन छन् । यस्तोमा प्रचण्ड चुप बसेका छन् ।
नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणसँग जोडिएको मुद्दा आगामी १५ गते निर्णय सुनाउने भनी प्रधानन्यायाधीश जबराले नहकुल सुवेदीको साथमा इजलास तोकेका छन् । त्यस्तै अदालतमै विचाराधीन नेकपा (एकीकृत समाजवाद)को दर्ता विवाद रहेकोले पनि उनीहरु प्रतिक्रिया दिन हतारिएका छैनन् । अन्य राजनितिक दलहरु न्यायालयको निर्णायक पहुँचबाट टाढै भएकोले प्रतिक्रिया दिनुको अर्थ देखिदैन । यस्तोमा सबै राजनितिक दलहरु तै चुप मै चुपको अवस्थमा बसेका छन् ।
रूपा खड्का ६ दिन अगाडी
सर्वसम्मत अध्यक्षकाे इतिहास रच्न लालायित ओलीको 'इगो'मा रावलले 'हर्ट' गरेपछि.....
कोरोना नियन्त्रणमा सफल सानो मुलुक भुटानको कथा
सम्पादकीय २ महिना अगाडी
यातायात व्यवसायीमाथी सरकारको ज्यादती, यात्रुमाथी यातायात व्यवसायीको ज्यादती !
रूपा खड्का ३ महिना अगाडी